Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Miasa toy ny andevo mandritra ny 20 taona? Voaroaka ianao!
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Envoy Air no mpitatitra fiaramanidina rezionaly lehibe indrindra ho an'ny American Airlines.
Ny fiasana amin'ny seranam-piaramanidina toy izany mandritra ny 20 taona dia midika fanoloran-tena sy asa mafy. Mety hahatsapa ho toy ny andevo amin'ny asanao izy indraindray.
Rehefa miasa ho an'ny Iraka dia tsy tokony himenomenona. Tsy azonao atao koa ny miresaka momba an'i Rush Hour, ilay sarimihetsika Jackie Chan.
Mety handroaka anao io.
Amin'ny taratasy iray mankany Envoy Air fitantanana tamin'ny 25 aogositra 2021, mpisolovava an'i New York Lee Seham mandray an'i Envoy Air, mpiara-miasa amin'ny American Airlines, hamita ny asany amin'ny famaranana ireo mpiasa telo noho ny fiantsoany ny tenany ho “andevo” ary fitanisana andalana avy amin'ilay sarimihetsika Jackie Chan Rush Ora ho fitaovana iray hanazavana fa tsy natao hanafintohina ny hafa ny fanovozan-kevitra.
Ireo mpiasa telo - Losaolima Fonokalafi, Faye Tuala, ary Asefash Asfaha - samy manana ny zokinjokiny roapolo (20) taona. Mpifindra monina avy any Tonga, Samoa, ary Eritrea (Africa) izy ireo, ary i Envoy no miasa ho mpikarakara manokana momba ny fanaraha-maso.
Nahita antony hampiatoana an-dRamatoa Fonokalafi ny iraka satria, ho valin'ny fanehoan-kevitra nataon'ny mekanika fiaramanidina iray fa miasa mafy loatra izy, dia nanaiky izy fa niara-niasa toy ny “andevo” izy sy ny mpiara-miasa aminy.
Ny herinandro manaraka dia nifanehitra tamin-dRamatoa Fonokalafi ny mpiara-miasa fotsy hoditra iray ary nilaza fa “tena misy ny fiainana mainty.” Ramatoa Asfaha - Afrikanina-amerikana teraka tany Eritrea - dia tonga hiaro ny mpiara-miasa aminy tamin'ny fanazavana fa Rtoa Fonokalafi dia avy any Tonga ary nanana fiainana hafa niainany tamin'ny mpiampanga azy fotsy.
Nampitahain'i Ramatoa Asfaha ilay mpiara-miasa aminy amin'ilay polisy mpitsikilo polisy Shinoa tsy manan-tsiny tamin'ny horonantsary malaza izay nanao fanamarihana tsy nahy tao amin'ny bara iray izay nohanin'ny Afrikanina-amerikanina irery ihany, ary nangataka an-dRamatoa Tuala mba hahazo fanampiana amin'ny fampahatsiahivana ilay sarimihetsika sy ilay seho. Ramatoa Tuala no nanolotra ny anaran'ny sarimihetsika sy ny teny nalaina mifandraika amin'izany hanampiana an-dRamatoa Asfaha hanazava ny tsy fananan-tsiny Ramatoa Fonokalafi.
Nofoanan'ny irak'Andriamanitra Rtoa Fonokalafi sy Ramatoa Tuala noho ny filazan'izy ireo fa nanao referansa "andevo" tsy mety ary satria "nitanisa andalana sarimihetsika" manafintohina izy ireo. Nofoanan'ny irak'Andriamanitra Rtoa Asfaha noho izy voalaza fa nanonona ireto andalana sarimihetsika ireto ihany.
Ny taratasin'Andriamatoa Seham tamin'ny 25 aogositra, izay nanome alalana ny Iraka avy amin'ny Birao Nasionaly momba ny fifandraisana amin'ny asa, dia nilaza fa ny mpiasa iray dia manan-jo araky ny lalàna federaly momba ny asa mba hamoaka fitarainana momba ny toe-piainany miasa amin'ny fiteny toy izany. Niady hevitra ihany koa izy:
Ny firazanana rehetra dia andevozina ary nanandevo ny hafa. Ny fifandonana iraisan'ny repoblika voalohany dia ny valin'ny piraty afrikanina izay nanandevo ny tantsambo eropeana sy fotsy amerikana iray tapitrisa. Amin'ny teny anglisy, ny teny hoe "miasa toy ny andevo" na "mpanompo karama" dia fiteny idiomatika mahazatra izay tsy misy dikany hafa fa ilay olona dia miasa mafy mba hahazo onitra kely.
Nilaza ihany koa i Seham fa ny famaranana ireo mpiasa mandritra ny androm-piainana mandritra ny androm-piainany momba ny horonantsary malaza izay mitentina 245 tapitrisa dolara manerantany dia tsy azo hamarinina, indrindra fa ny tanjon'ny referansa dia ny tsy hanafintohina fa hampiroborobo ny fahatakarana. Ambonin'izany, ny hany afrikanina-amerikanina nanatrika tamin'izany fotoana izany dia Ramatoa Asfaha, izay notapahin'ny irakiraka.
Tamin'ny 30 Aogositra, ny solontena dia namaly an'i Andriamatoa Seham fa "miasa amin'ny fanangonana angon-drakitra momba an'ity raharaha ity izy."